Global Aawaj | कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, के-के छन् सुविधा ? कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, के-के छन् सुविधा ?
कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, के-के छन् सुविधा ?
३१ भाद्र २०७८ 9:15 am
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले कूल लगानी सवा चार खर्च नाघेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कूल लगानी ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुर्‍याएको हाे । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा संस्थामा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ ।
सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउँछन् । जसको ब्याजदर ७.६० प्रतिशत छ । घर निर्माण गर्न वा घर खरिदमा अधिकतम एक करोडसम्म ७.९० प्रतिशत ब्याज छ । घर मर्मतमा पनि ७.९० प्रतिशत ब्याजरदमा ऋण लगानी हुन्छ । ७.९० प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक ऋण लिन पाइन्छ भने ८ प्रतिशतमा सरलचक्र कर्जाको सुविधा छ ।